Inkampani - DT-TotalSolutions
I-DT-TotalSolutions yinkampani yetekhnoloji ephezulu egxile ekuboneleleni ngenkonzo yezisombululo kwindawo enye ngokuthwala ingqikelelo okanye umbono wakho kwimveliso ezenzekelayo kunye nendibano ukukunceda ufumane imveliso yokugqibela obuyifuna kanye.
Sobabini ISO9001-2015 kunye ISO13485-2016 inkampani eqinisekisiweyo kunye isakhono esomeleleyo kuyilo nobunjineli. Ukusukela ngo-2011, besithumela ngaphandle amakhulukhulu ezixhobo kunye nezigidi zeendawo zehlabathi ngokubanzi. Sizuze igama elihle kakhulu ngokunikezela ukuyila kunye nokwakha izixhobo ezikumgangatho wokuqala ngenkonzo egqwesileyo.
Ngezicelo zabathengi bethu, ngo-2015, siye sandisa inkonzo yethu ngoyilo lwemveliso ngokuseka isebe loyilo lwemveliso; Ngo-2016, saqala isebe lethu lokuzenzekelayo; ngo-2019, saseka isebe lethu letekhnoloji yombono ukunceda ukuphucula ukubumba kunye nomgangatho wokuzenzela kunye nokusebenza kakuhle.
Ngoku besikhonza abathengi abavela kumashishini ahlukeneyo. Amandla ethu amakhulu kwiimveliso zonyango, iimveliso ze-elektroniki, ukupakishwa kunye neemveliso zeplastiki ezintsonkothileyo.
Nokuba ngaba iimveliso zakho zenziwe ngeplastiki, irabha, ukuphosa ukufa okanye utyalo-mali lwentsimbi engenasici, sinokukunceda ukuba uphumeze imbono uye kwiimveliso zokwenyani.
Kungakhathaliseki ukuba ukhangele iimbumba zeplastiki / iindawo ezibunjiweyo okanye ukhangele isethi epheleleyo ye-automation-line-production-line ephezulu, i-DT-TotalSolutions iya kunika isisombululo esihle kuwe.
Umbono wethu kukuba yinkokeli ephezulu ekuboneleleni ngenkonzo yesisombululo esipheleleyo.
Izinto eziluncedo ngokusebenza ne-DT-TotalSolutions:
--Inkonzo epheleleyo yokumisa enye ukusuka kwimbono yakho ukuya kwiimveliso zokugqibela.
-- 7days*24hours unxibelelwano lobuchwephesha kuzo zombini IsiNgesi kunye nesiHebhere.
-- Inkxaso evela kubathengi abathembekileyo.
-- Sisoloko sizifaka kwizihlangu zabathengi.
-- Inkonzo yasekhaya yelizwe jikelele yoku-odola kwangaphambili kunye nasemva kokuhanjiswa.
-- Ungaze uyeke ukufunda kwaye ungaze uyeke ukuphucula ngaphakathi.
- Ukusuka kwisiqwenga esinye ukuya kwizigidi zamalungu, ukusuka kwiziqwenga zamacandelo ukuya kwiimveliso ezidityanisiweyo zokugqibela, siyakunceda uzalisekise phantsi kophahla olunye.
Ukusuka kwizixhobo zokutofa ngeplastiki ukuya kwisitofu sokubumba kunye ne-automation-asembly-line-line, unokusithemba ukuba siya kukunika esona sisombululo sisesona sisesona sisombululo sisekwe kwiimfuno zakho kwaye sigutyungelwe luhlahlo lwabiwo-mali lwakho.
-- amava atyebileyo kwiisirinji, iimveliso zelabhoratri ezifana nesitya se-petri kunye neetyhubhu zovavanyo okanye i-burette.
-- amava atyebileyo ekuyileni nasekwakheni izixhobo zeMulti-cavity ezingaphezu kwe-100-cav.
-- Ukukunceda ukuba uphucule uzinzo lwemveliso kunye nokusebenza kakuhle kunye nenkqubo yokujonga i-CCD ngeteknoloji yombono.
- Amava atyebileyo okujongana neeplastiki ezikhethekileyo ezifana nePEEK, PEI, PMMA, PPS, iiplastiki zefiber zeglasi ephezulu ...
Uyilo kunye nokuveliswa kokubumba kunye nezixhobo ezizenzekelayo zombini ngumsebenzi wexesha elinye kunye nokungaphindi. Ke ulawulo lomgangatho luba lubaluleke kakhulu ukuzalisekisa yonke iprojekthi ngempumelelo! Oku ingakumbi kushishino lokuthumela ngaphandle ngenxa yexesha kunye nesithuba umahluko.
Uqokelele amava atyebileyo angaphezulu kwe-10years ekuthumeleni ukubumba kunye nenkqubo yokuzenzekelayo, iqela le-DT lihlala lithatha uMgangatho njengento ephambili kuqala. Silandela ngokungqongqo ISO9001-2015 kunye ne-ISO-13485 inkqubo yokulawula umgangatho ukuzalisekisa zonke iiprojekthi esinazo.
Ngaphambi kokuba iprojekthi yokubumba iqale, sihlala sinentlanganiso yokuqala ukuxoxa ngazo zonke iinkcukacha ezithile kunye neemfuno ezikhethekileyo malunga neprojekthi. Sihlalutya zonke iinkcukacha kwaye senza esona sicwangciso silungileyo ngokulungiswa komatshini wokuphumeza iprojekthi. Umzekelo: yeyiphi eyona intsimbi yentsimbi engundoqo / i-cavity / ifake nganye, yintoni eyona nto ingcono kakhulu ye-electrode, yintoni eyona nto ibhetele yokwenza izinto ezifakelwayo (i-3D yokushicilela i-printing isetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi zethu zonyango kunye neeprojekthi zethu ze-stack-mold ), nokuba iprojekthi kufuneka isebenzise i-DLC coating... Zonke zichazwe ngokweenkcukacha kwasekuqaleni kwaye ziphunyezwe ngokungqongqo kuyo yonke iprojekthi. Ngexesha lokucubungula sinomntu othile onokuthi ajongwe kwakhona ngokujonga umva inkqubo nganye.
Sikwanalo neqela lethu leteknoloji yembono ukusinceda sijonge inkqubo yeCCD. Oku kuluncedo ngakumbi kwaye kubalulekile kwiZixhobo zokuZisebenzela. Kwiprojekthi ye-Automation, ngaphambi kokuthumela ngenqanawa sihlala sisenza i-20-30days simulation run ukuze siqinisekise uzinzo lwenkqubo olusebenzayo. Sinenkxaso ye-post-service yasekhaya kuzo zombini i-molds kunye ne-automation system emva kokuthumela ngaphandle. Oku kunokunciphisa inkxalabo yabathengi ngokusebenza nathi.
Idilesi:Indawo yoshishino yaseHonglaiya, eShatou, kwidolophu yaseChang'an, kwisiXeko saseDongguang, eGuangdong, eChina.